तपाईंलाई त पूर्वराजाले पनि पत्याउनु हुन्न रे ! « Janata Samachar
तपाईंलाई त पूर्वराजाले पनि पत्याउनु हुन्न रे !
प्रकाशित मिति : 11 February, 2019 9:27 am
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री एवम् सांसद राजेन्द्र लिङ्देनसँगको अन्तरवार्ता निकै रोचक बन्यो । नबनोस् पनि कसरी, पार्टीका एक्ला सांसदले सिंगो सिद्धान्त, रणनीति, आगामी कार्यदिशा, अडानलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
उहाँले संसदमा फरक अनुभूति त गर्नुभएको छैन, तैपनि एक्लै सांसदले बोलिरहँदा माग पूरा हुन्छन् वा हुँदैनन् यो प्रमुख विषय हो । अन्तरवार्तामा लिङ्देनले भन्नुभयो– ‘संसदमा सांसदले बोलेका सबै माग कहाँ पुरा हुन्छन् र ? सबै माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जायज मागहरु सम्बोधन भएकै छन् ।’
संगठनलाई सशक्त बनाउने मिसनमा लागेको राप्रपाले हिन्दुराज्य कायम गर्दै राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । अन्तरवार्तामा अर्को प्रश्न थियो– युग सुहाउँदो तपाईंको एजेन्डा भए नि, सम्भव छ नेपालमा राजसंस्था ?
लिङ्देन भन्नुहुन्छ, ‘असम्भव केही छैन, राजसंस्था आउँदैमा मुलुकमा विकास नहुने भन्ने हुन्छ र ? कुनै द्वन्द्वको सिर्जना गरेर राजसंस्था फर्काउने होइन शान्तिपूर्ण ढंगले स्थापित गराउनुपर्छ ।’ माओवादी युद्धकालको स्मरण गर्दै लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘२०५२ साल फागुन २ गते माओवादीले युद्धको घोषणा गर्दा कति नै जनशक्ति थियो र ? यदि अहिले राप्रपाका सबै शक्ति भूमिगत रुपमा लागेर युद्धको सुरुवात गरिन्छ भने के हुन्छ हालत ? तर हामी त्यस्तो चाहन्नौ । शान्ति र सुव्यवस्थित ढंगले राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गराउनुपर्छ ।’
पूर्वराजाले त तपाईंलाई पत्याउन छोड्नुभयो नी भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनको जवाफ यस्तो छ– ‘हामी कुनै राजाले खोलेको अमुक पार्टी होईनौ, एजेन्डा हो । हिजोका दिनमा मुलुकको हितका पक्षमा राप्रपा उभिएका इतिहास जगजाहेर नै छन् । राजाले पत्याउने नपत्याउने बिषय प्रधान होइन ।’ लिङ्देनले सरकारका कामकारबाही प्रति असन्तुष्टि समेत जनाउनुभयो । दुई तिहाइको दम्भले मुलुक खतरामा जाने भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।